Home » Health Services » Clinging to Tree Tops, Zimbabweans Bid Farewell to Tsvangirai
Zimbabweans climbed into tree tops and onto bus carriers in a heavy downpour on Tuesday to give opposition leader Morgan Tsvangirai an emotional
burial next to his first wife in his rural home of Buhera.
Tsvangirai, a former trade union leader who rose to
prominence by posing the biggest - many said the most daring - challenge to ex-president Robert Mugabe, died of cancer on February 14 aged 65.
In his home village of Buhera, 250 km (156 miles) southeast of the capital Harare, Tsvangirai was known by his clan name Save, originating from a once mighty river that flows from southern Zimbabwe to Mozambique.
"I have come to mourn a dear brother and a friend, a great African and Zimbabwean. Zimbabwe and Africa have lost a torchbearer of the second liberation of Africa," Odinga said.
Oppah Muchinguri, a cabinet minister and national
chairperson of the ruling ZANU-PF said she had known Tsvangirai since his days as union leader and worked with him during the "difficult times" of the unity government.
"Tsvangirai's work speaks for itself. He valued others
before he thought of himself. He was a unifier for the children of Zimbabwe," said Muchinguri, who was initially booed by the MDC crowd.
Party youths mobbed and threatened to beat up MDC vice
president Thokozani Khupe and secretary general Douglas Mwonzora as they arrived for the burial, but quick intervention by the party's acting president, Nelson Chamisa, calmed the situation.
February 20, 2018 Web Desk Health Services Comments Off on Clinging to Tree Tops, Zimbabweans Bid Farewell to Tsvangirai
«Lord Ahmad congratulates The Gambia on Commonwealth re-entry
ZIMBABWE BIDS FAREWELL TO OPPOSITION HERO TSVANGIRAI»